Nayakhabar.com: सावधान ! एटीएमबाट पैसा चोरिएला
सावधान ! एटीएमबाट पैसा चोरिएला
काठमाडौं । तपाईंको एटीएमबाट पैसा चोरी भएको त छैन रु एकपटक आफ्नो बैंक खातामा पैसा छ कि छैन चेक गरिहाल्नुस् । कतै अन्तर्राष्ट्रिय संगठित अपराधीले तपाईंको खातामा रहेको पैसा नक्कली एटीएमबाट निकालिसकेका पो छन् कि १ टर्की, बुल्गेरिया, रोमानियालगायत मुलुकका संगठित अपराधी अत्याधुनिक प्रविधि र उपकरण लिएर विभिन्न एटीएम बुथबाट पैसा निकाल्न सक्रिय भएको पाइएको छ ।
नेपाली तथा विदेशी बैंकका ग्राहकको खाताबाट रकम निकाल्ने अन्तर्राष्ट्रिय संगठित गिरोह नेपालमा सक्रिय भएका छन् । विदेशी नागरिकका क्रियाकलाप निगरानी गर्न गृह मन्त्रालय उदासीन देखिइरहेका बेला त्यसको फाइदा उठाउँदै पर्यटक भिसामा नेपाल आएका विदेशी विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुँदै आएका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले विभिन्न एटीएम बुथमा कार्ड स्किमिङ डिभाइस र हिडन क्यामरा प्रयोग गरी सर्वसाधारणको एटीएमको सूचना लिएर पैसा निकाल्न संलग्न भएका तीन रोमानियाली नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ । ती रोमानियाली नागरिकले ठमेल, दरबारमार्गलगायत ठाउँका बुथबाट सर्वसाधारणको एटीएम दुरुपयोग गरी रकम निकालेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ । नेपालमा झन्डै ३४ लाख एटीएम प्रयोगकर्ता छन् ।
ती संगठित अपराधीले विभिन्न एटीएम बुथमा हिडन क्यामरा र स्किमिङ डिभाइस राखेर दिनभरमा एटीएमबाट कारोबार गरेका सर्वसाधारणको पिन नम्बरलगायत विवरण लिने गरेका थिए । अत्याधुनिक प्रविधिको उक्त हिडन क्यामराले पिन नम्बर रेकर्ड गर्ने र स्किमिङ डिभाइसले एटीएमको अन्य विवरण रेकर्ड गर्ने गर्छ । उनीहरूले एटीएम बुथमा उक्त प्रविधि जोड्न र निकाल्नका लागि त्यसवरपर अस्वाभाविक ढंगले लामो समय बिताउने गरेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ ।
त्यस्ता गिरोहमा संलग्न व्यक्ति एटीएम कार्ड छिराउने ‘कार्ड स्लटु मा विद्युतीय ‘कार्ड रिडिङ डिभाइसु जडान गरी बाहिर निस्कने र त्यसको निगरानी गर्न बुथवरपर बस्ने गर्छन् । प्रहरी नायव महानिरीक्षक ९डीआईजी० नवराज सिलवालले एटीएम प्रयोगकर्ताले सकेसम्म छिटोछिटो पिन नम्बर परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘यसमा अन्तर्राष्ट्रिय संगठित अपराधी नै संलग्न भएको देखिन्छ । थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।ु